novembre | 2019 | InfoKmada
Kaominina Anosizato Andrefana : kandidà 3 manohitra ny voka-pifidianana
InfoKmada - 29 novembre 2019 0
Tsy azo ekena ny voka-pifidianana ben’ny Tanàna sy mpanolotsaina tao amin’ny kaominina Anosizato Andrefana hoy ireo kandidà 3 nirotsaka tao an-toerana androany. Maro ny hosoka sy ny halabato tsikaritra, raha ny fitarainana azo.
Fitarainana fifidianana Kaominaly : ny fitsarana miady amin’ny fanjakana no mandray izany
Ny fitsarana miady amin'ny fanjakana no mandray ny fitoriana mahakasika ny tsy fanarahan-dalàna na ihany koa fandikan-dalà,na rehetra manoloana ny fifidianana kaominaly, sokajin'olona maro samihafa no afaka mametraka fitoriana araka ny voalazan'ny lalàna.
Fikirakirana voka-pifidianana : tsy mitovy tamin’ny fifidianana teo aloha
Tsy mitovy tamin’ny fifidianana efa nisy teo aloha ny fikirakirana ny voka-pifidianana amin’ity fifidianana ben’ny tanàna ito raha ny nambaran'ny filoha lefitry ny CENI androany, ny eto anivon'ny faritra analamanga ihany no kirakiraina etsy amin'ny foibe etsy Alarobia fa ny ankoatra ireo samy mikirakira ny vokatra avokoa ny eo anivon'ny faritany hafa manerana ny Nosy.
SRMV : nanomboka androany ny fikirakirana ny vokatra
Ho voahaja ny 5 andro hikirakiran’ny SRMV ny antotam-baovao mikasika ny voka-pifidianana. Androany, saika efa tonga teny an-toerana avokoa ny PV raha ny fanadihadiana natao ho an’Antananarivo sy ny manodidina. Etsy ankilany, fepetra maro no tontosaina mialohan’ny handefasana izany eny amin’ny CENI .
Fifidianana kaominaly : efa tomombana avokoa
InfoKmada - 27 novembre 2019 0
Efa tomombana avokoa ny fanomanana ny fifidianana kaominaly izay hotanterahina ho an'ny androan'ny rahampitso. Efa voaparitaka avokoa ireo fitaovana rehetra ilaina manerana ny nosy, ny fizotry ny fandatsaham-bato sy ireo tsara ho fantatra ho an'ny andron'ny rahampitso no entina aminao ao anatin'ity fanadihadiana ity.
Fanafihana fiarabe teny Iavoloha : voasambotra ireo olon-dratsy
Miaramila amperin'asa miisa telo ary zandary efa voaroaka iray no isan'ireo atidoha nikotrika ny fanafihana ny fiarabe iray nitondra sigara teny Iavoloha ny 20 Novembre lasa teo, efa voasambotry ny mpitandro filaminana misahana ny ny heloka bevava na ny Section des Recherches Criminelles izy ireo ary natolotra ny fampanovana androany.
Fikajiana ny lalana : samy tomponandraikitra ny rehetra
Mihamaro ny fanasana fiara eny amin’ny Arabe eto an-dRenivohitra. Ity farany izay isany manimba anatin’ny fotoana fohy ny lalana, ary voararan’ny lalàna ihany koa. Samy tomponandraikitra amin’ny fikajiana ny lalana ny olompirenena rehetra. Manentana manoloana io ny eo anivon’ny MAHTP ny handraisan’ny rehetra andraikitra ny amin’izany sy hitandrovana ny fananam-bahoaka.
Andry RAJOELINA : fotodrafitrasa mitsinjo lavitra ny fivoaran’ny mponina no hantsangana
Fotodrafitrasa mendrika ho an’ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Fotodrafitrasa mifanaraka amin’ny fivoaran’ny mponina sy ny tanan-dehibe. Izay no azo amintinana ny fotodrafitrasa hatsangan’ny filohan’ny repoblika eto Madagasikara, araka ny nambarany nandritra ny fandaharahana manokana omaly.
Fitakiana ireo Nosy Malagasy : amin’ny faha-9/10/11 desambra ho avy izao ny fihaonambem-pirenena
InfoKmada - 26 novembre 2019 0
Taorian’ny fihaonana voalohany teo amin’ny solontena Malagasy sy Frantsay ny amin’ny hamerenana ireo Nosy Malagasy aty amin’ny Ranomasimbe Indiana iny dia ho tontosaina amin’ny faha-9, faha-10 ary faha-11 desambra ho avy izao ny fihaonambem-pirenena hakana ny hevitry ny Malagasy amin’ny hamerenana ireo Nosy ireo ho an’i Madagasikara.
Lycée RABEARIVELO : notokanana ny efitrano fianarana vaovao
Notokanana androany ny efitrano fianarana vaovao natolotry ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana teknika ary ny fampiofanana arak'asa ho an'ny Lycée JJ Rabearivelo. Fanorenana fotodrafitrasa izay tafiditra ao anatin'ny Politikan'ny mpitondra fanjakana ankehitriny amin'ny alalàn'ny ministera tomponandraikitra.